Izay mitady handatsaka izany kilao fanampiny izany dia mitady sakafo isan-karazany sy fanafody famoahana lanja mavesatra. Fa raha tsy misy ezaka sy faharetana dia tsy misy na inona na inona mitranga.
Profesora mpiara-miasa ao amin'ny Harvard Medical School Osama Hamdiy, izay lohandohan'ny mpitsabo sy talen'ny ivon-toerana Diabeta Joslin mikaroka ny fiantraikan'ny fomba fiainana amin'ny fihenan'ny lanja, no namolavola ny sakafony, noho izany maro no namoy ny lanjan'ny fankahalana nefa tsy nanimba ny fahasalaman'izy ireo.
Fitsipika fototra amin'ny sakafo Osama Hamdiy
Ny fototry ny sakafon'i Osama Hamdiy dia tsy fihenan'ny kaloria amin'ny sakafo lanina, fa ny fizotran-javatra mitranga ao amin'ny vatana, izay mamotika ny tavy be loatra.
Mazava ho azy, ny sakafo toy izany dia heverina ho hentitra, satria tsy azonao atao ny manitsakitsaka ny sakafom-pisakafoanana na manao fanavakavahana. Voalahatra mandritra ny 4 herinandro ny menio, mandritra izany fotoana izany dia afaka mihena 5 hatramin'ny 30 kg ny lanjany be loatra ianao, aorian'izay dia tokony hifindra amin'ny sakafo ara-dalàna ianao.
Aza adino ny manao fanazaran-tena amin'ny fotoana iray, satria fantatry ny rehetra fa tsy mikoriana ao ambanin'ny vato mandainga ny rano.
Fitsipika momba ny sakafo ao Osama Hamdiy
Lisitry ny vokatra omena:
1. Voankazo: mananasy, apricot, paiso, grapefruit, tangerine, paoma, poara, orange, kiwi, watermelon, melon, plum.
2. legioma (nandrahoina fotsiny): pitipoà sy tsaramaso maintso, atody sy zucchini, karaoty sy zucchini, voatavo. Ary koa legioma hafa, afa-tsy ireo voarara.
3. Hena sy trondro: hena tsy misy tavy, akoho tsy maintsy andrahoina (andrahoina na atono) aorian'ny fanesorana ny hoditra. Trondro na makamba, volondavenona nandrahoina na am-bifotsy.
4. Mofo, tsara kokoa ny voa na ny rongony.
Lisitry ny vokatra voarara:
1. Voankazo: akondro, manga, voaloboka, daty, aviavy.
2. legioma: ovy.
3. Hena: hena matavy sy trondro matavy, zanak'ondry.
Misy karazana menus maromaro ho an'ny sakafo Osama Hamdiy, izay natao mandritra ny 28 andro ary mizara 4 fito andro. Ity ambany ity dia iray amin'izy ireo.
Zava-dehibe: tsy azo soloina ny vokatra!
Izay tsy azonao hanina amin'ny sakafo sakafo
Ny sakafo fito andro voalohany
Mitovy ny sakafo maraina isan'andro :? ampahan'ny grapefruit + atody nandrahoina na nandrahoina - 2 pcs.
Ho an'ny sakafo atoandro:
Andro voalohany: voankazo mitovy karazana aminy.
Andro faharoa: hena, salady legioma, grapefruit - 1 pc.
Andro fahatelo: fromazy fotsy matavy ambany, sombi-mofo rai, tomaty.
Andro fahefatra: voankazo.
Andro fahadimy: atody nandrahoina - 2 pcs., Legioma voatavo.
Andro fahenina: voankazo.
Andro fahafito: hena, salady na legioma voatabia, grapefruit - 1 pc.
Ho an'ny sakafo hariva:
Andro voalohany: hena mahia.
Andro faharoa: atody nandrahoina -2 pcs., Sombi-mofo vita amin'ny ranom-boaloboka, grapefruit.
Andro fahatelo: hena.
Andro fahefatra: hena, salady legioma maintso.
Andro fahadimy: trondro nandrahoina, salady maitso, grapefruit - 1 pc.
Andro fahenina: hena.
Andro fahafito: legioma voatavo.
Sakafo fito andro faharoa an'i Osama Hamdiy:
Andro voalohany: atody nandrahoina - 2 pcs., Salady maintso.
Andro faharoa: hena na trondro, salady.
Andro fahatelo: mitovy amin'ny andro faharoa.
Andro fahefatra: atody nandrahoina - 2 pcs., Fromazy Feta, legioma-saka.
Andro fahadimy: trondro na hazan-dranomasina.
Andro fahenina: hena, salady, grapefruit - 1 pc.
Andro fahafito: hena akoho, salady legioma, grapefruit - 1 pc.
Voalohany, faharoa, andro fahatelo: atody nandrahoina - 2 pcs., Voaloboka - 1 pc.
Andro fahefatra, fahadimy, fahenina: voankazo.
Andro fahafito: hena akoho, voatabia, grapefruit -1 pc.
Fito andro fahatelo:
Mihinana amin'ny volavola rehetra tontolo andro izahay:
Andro voalohany: voankazo.
Andro faharoa: legioma steamed, salady ravina.
Andro fahatelo: na voankazo na legioma nohamainina.
Andro fahefatra: trondro, salady.
Andro fahadimy: hena akoho.
Andro fahenina: karazana voankazo iray.
Andro fahafito: karazana voankazo iray.
Sakafo fito andro fahefatra ho an'ny fihenan-danja:
Tokony hizara ireo vokatra eo amin'ny menio mandritra ny tontolo andro ianao ary hihinana araka izay voalaza ao amin'ny lamina rehetra.
Andro voalohany: henan'akoho - 200 gr., Trondro - 200 gr., Voatabia, kôkômbra, volomboasary - 1 pc., Voaloboka - 1 pc.
Andro faharoa: mofo voa iray manontolo - silaka 2, salady kôkômbra sy voatabia, voankazo - 4 pcs.
Andro fahatelo: mofo voa feno - tapa-2, fromazy an-trano (tavy 0%) - 100 gr., Orange - 2 pcs., Voaloboka - 2 pcs. , legioma nandrahoina - 200 gr., voatabia - 2 pcs.
Andro fahefatra: henan'akoho? ampahany amin'ny akoho, salady kôkômbra - 2 pcs. sy voatabia - 2 pcs., volomboasary - 1 pc., grapefruit - 1 pc.
Andro fahadimy: atody nandrahoina - 2 pcs., Salady legioma, grapefruit - 1 pc.
Andro fahenina: mofo voa iray manontolo - silaka 1, kôkômbra - pc 1, fromazy na feta fromazy - 100 gr., Hena akoho - 200 gr.
Andro fahafito: mofo voa iray manontolo - silaka 1, voatabia - 2 pcs., Trondro - 150 gr., Hena akoho - 200 gr., Voasary - 1 pc., Voaloboka - 1 pc., Legioma - 200 gr.
Tsy maintsy atao ny misotro rano 2-5 litatra farafaharatsiny mandritra ny andro, avela dite sy kafe tsy misy siramamy. Afaka mihinana ianao fa tsy fromazy fromazy trano tsy misy tavy, ary raha tokony ho grapefruit - voasary. Tsy voafetra ny lanjan'ny vokatra. Fa ny fampihetseham-batana miaraka amin'ny sakafon'i Osama Hamdiy dia manome valiny mahavariana.
Zava-dehibe: ny tsy fanarahana ny sakafo ary tsy maintsy manomboka indray ianao manomboka amin'ny andro voalohany, ary manatona ny dokotera raha manana aretina mitaiza.
Sakafo millet - mampihena lanja sy manatanjaka ny vatana
Sakafo laisoa (minus 24 kg isam-bolana): valiny sy valiny (sary)
Sakafo legioma ho an'ny fatiantoka mavesatra: fomba fanao sy menus mandritra ny herinandro
Sakafo lasopy - mampihena lanja ao anatin'ny 7 andro
Prev Momba ny strudels, tatena ary famenoana
Manaraka Lasopy mandoro tavy - fomba fahandro marobe ilaina amin'ny famoizana lanja
59 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,692.